Nchịkọta: API maka Ngosipụta Ihe Ngosipụta Foto nke Kwadoro site na ọgụgụ isi | Martech Zone
Imega bu ihe ngosiputa onyonyo zuru oke maka ndi mmepe na azuma ahia itinye ihe ichota onyonyo n’ime nyiwe ha. API na-enye ọtụtụ njirimara, gụnyere:
Categorization - Na akpaghị aka categorise gị oyiyi ọdịnaya. Ike API maka nhazi onyonyo ozugbo.
Agba - Ka agba mee ka ihe ngwaahịa gị pụtara. Ike API maka agba agba.
cropping - Na-akpaghị aka ịmepụta ihe osise mara mma. Ike API maka ọdịnaya-maara ihe ọkụkụ.
Omenala Ọzụzụ - Zụlite imagga ihe oyiyi AI iji hazie foto gị na ndepụta nke edemede gị.
Nweta ihu - Mepee njirimara ihu na ngwa gị. Ike API maka ihu ihu ụlọ.
Otutu asusu - Ugbu a enwere asụsụ 46 na-akwado ogbe Imagga, udi, na tagging APIs.
Enweghị Nchedo Maka Ọrụ (NSFW) - Akpaghị aka okenye okenye ọdịnaya imeru ihe n'ókè zụrụ na steeti nkà art ude technology.
Nkpado - Akpaghị aka ekenye na mkpado gị ihe oyiyi. API dị ike maka nyocha na nchọta onyonyo.
Nchọpụta Anya - Mee ka nchọpụta ngwaahịa dị na ngwa gị. API dị ike maka iwulite ikike ọchụchọ anya.
Ikpo okwu a nwere ikike karịrị ngwa azụmahịa 180 gafee mba 82 nwere ihe karịrị 15,000 mmalite, mmepe, na ụmụ akwụkwọ.
Nyochaa akwụkwọ nyocha API nke Imagga
Kedu ka ichota onyonyo ga enyere ndi ahia aka?
Enwere ọtụtụ ụzọ ndị otu nwere ike isi mee ka ọhụhụ onyoonyo wee melite arụmọrụ nke ụlọ yana melite ahụmịhe ndị ahịa na mpụga. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha:
Mfe hazie ihe dijitalụ gị ma mee ka ha chọọ site na akpado akpado, categorization, na ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ narị ndị ọrụ na-ebugote ihe oyiyi na ime ka njikwa akụ gị dijitalụ bụrụ ọgba aghara, iji ngwaọrụ dịka Imagga nwere ike ịmepụta usoro gị na ịkwanye arụmọrụ ka mma na nzukọ gị.
mma nhazi ihe di omimi site na nkpado na ntinye agba. Cheedị ngosipụta ngwaahịa ndị ha na ha kacha emekọrịta kama ịtụ iwu ka ha jiri aka ha nyocha ma họrọ ha. Nwere ike machiini prioritization na ngosipụta nke ihe oyiyi iji kwekọọ mara personas nke gị ọbịa.
Mee ngwa ma ọ bụ ọrụ nke na-enye ndị ọrụ gị nzaghachi na-akpaghị aka dabere na ihe oyiyi ha bulite. Nke ahụ bụ ike Imagga Osisi, ngwa ngagharị nke nwere ike ịmata osisi, ifuru, cacti, succulents, na mushrooms na sekọnd.
Rụpụta ọkọlọtọ akpaghị aka usoro maka ihe oyiyi NSFW ndị ọrụ na-ebugo gị na ikpo okwu gị. Ngalaba a gunyere onyonyo gba ọtọ, akwara akụkụ ahu ekpughere, ma ọ bụ mkpuchi uwe.
Chọpụta akụkụ ma ọ bụ ngwaahịa na anya na mmepụta ma ọ bụ n'ichepụta gburugburu. Mahadum Seoul National University mebere a DI MGBE EGO Ihe nchoputa nke achoputara ma nye umu akwukwo akwukwo ndi natara ihe ziri ezi na uzo ozo.
Imagga na-enyekwa ngwongwo ngwongwo ma ọ bụrụ na nzukọ gị chọrọ nnukwu data, ga-enwerịrị nzuzo, ma ọ bụ chọọ ohere na ndekọ data n'ihi usoro iwu chọrọ.
Nweta Free API Igodo
Tags: aiAmamịghe echichenchọpụta agbaọdịdị ihu udenhazi udi onyonyooyiyi croppingnchọpụta ihe oyiyioyiyi udeochicho onyonyonkpado ihe oyiyingwa igweotutu asụsụenweghị nchebe maka ọrụnsfwnyocha anya